Ny mponina an-tanàn-dehibe no tena voakasik’izany raha mbola miaina anatin’ny haizina kosa ireo mponina eny ambanivohitra. Nahita vahaolana entina hamahana izany ireo mpianatry ny sekoly ambony ISPM eny Antsobolo sady tsy lavitra. Io vary vokarin’ny tantsaha mpamokatra io ihany mantsy no hitan’izy ireo fa azo hamokarana herinaratra ho an’ny isan-tokantranony ka zakany tsara ny famahanana finday sy ny fihainoana radio, miankina amin’ny filan’ny tsirairay. Efa nahitan’ireo mpianatry ny ISPM vahaolana ihany koa ny halafosan’ny vidin-tsolika ka tamin’ny alalan’ny pipi na fivalanan-drano indray no nanaovan’izy ireo fikarohana ka nahazoana solika. Orinasa marobe no tonga nitsidika ireo voka-pikarohana voalaza ireo nanomboka ny alatsinainy lasa teo nifarana afak’omaly sabotsy. Afa-po tanteraka ny mpikarakara, raha araka ny fanazavan-dRahety Aimée, tompon’andraikitra ara-bola eo anivon’ny sekoly ary maniry hatrany ny hitohizan’ny fiaraha-miasa. Miisa 360 moa raha tsiahivina ireo tranoheva nandray anjara tamin’ity hetsika ity ka ny 150 isa voafantina tsara indrindra amin’izy ireo no fantatra fa hiakatra etsy amin’ny Carlton Anosy afaka herinandro vitsivitsy.